Isifo se-allergic rhinitis | Health Content
SIYINI ISIFO SE-ALLERGIC RHINITIS?
Kungukuvuukala kolwelwesi lwethambo lamakhala. Lokhu kungexa yokuthi amasosha omzimba angezwani nemvelo ethize. Lokhu kuvuvukala kubonakala lapho kuba nokucinana emakhaleni, irhinorrhoea, ukuthimula kanye nokulunywa. Ihlukaniswa njengezimpawa zezikhathi ezithile (ngaphansi kwezinsuku ezine ngeviki noma ngaphansi kwamasonto amane ) noma ephikelela( izinsulu ezingaphezulu kwenzine ngeviki noma ngaphezulu kwamaviki amane)
Izithasiselo zangaphandle ezinjengotshani, impova, izihlahla, ukhula, uthuli,njll.
I-allergens ezitholakala endlini ezifana nezidabukisa zezilwane ezifuyiweyo ezithandwayo, uboya bezilwane, zibungu zothuli, isikhunta, njll
Intuthu kagwayi, amakha anamandla, ukuqeda imfucuza.
Imibuthano emnyama ngaphans Kwamehlo
Umugqa ka-Dennie-Morgan noma izinkophe ezikhukhumezekile(puffy)
I-Nasal crease kanye nesatute
Isifo sobuso obude: Isiphithiphithi lapho ubuso bukhula khona nezinga eleqile ebangeni elime ngqo.
Amakhala omile, ulwanga kanye nezindlebe
Ukuvimbeka kwamakhala noma ukucinana
IRhinorrhoea noma ukuvuza kwamafinyila ngamakhala.
Ama-intra nasal corticosteroids: Angatholakala kwindlu yemithi ngaphandle kwencwadi obhalelwe udokotela.
Izelaphi ezisetshenziselwa ukususa ngokushesha futhi ngokuphumelelelayo izimpawu zesici.
Umuthi oqeda zingqungquthela (decongestants)
Izifafaza zamakhala (Nasa steroids spray): kuthatha izinsukusu eziningana ukukhahlela noma zisebeze.
Ama-leukotnenes pathway inhibitors
Izelaphi ukuvikela umzimba: Zingasiza ukufeza ukulawulwa kwesikhathi eside.
Isifo se-Otitis media with effusion
Ukwehliswa kwezinga yempilo
Isifo sobuso obude
UKUGUQUKA KWENDLELA YOKUPHILA
Gwema ukusebenzisa umshini wokuphepha umoya ongakudonsela impova
Thwala izibuko zokukuphephisa ekushiseni kwelanga noma ibuko ezijwayelekile ukuvikela amahlo akho ezinhlungwini zangaphandle.
Uma usebenza engadini yakho gqoka imaski yempova bese uphuza umuthi ofanele we-prophylactic ngaphambi kwesikhathi.
Zama ukweneka izambatho zakho endlini kunangaphandle ukuvikela iziphazamisi zangaphandle zinamathele ezingutsheni, ikakhulukazi amathawula namashidi.
Gwema ukuhlikihla amahlo akho uma aphazamisekile emehlweni
Geza izandla ngemuva kokuthinta izilwane ezifuywayo bese ugeze izingubo ngemuva kokuvakashela emakhaya abangane abane zilwane ezifuywayo.
Nciphisa imisebenzi yagaphandle bese ugcina amafasitela neminyango ivaliwa ngcingokunokwenzeka phakathi nesikhathi sempova.
Susa amakhaphethi egumbini lokulala
Zama futhi ugcine izilwane ezifuywayo zingangeni kwifenisha yakho, zingangeni egumbini lakho lokulala. Futhi uzame ukuzigeza njalo ngeviki.
Bulala izibugu zothuli, washa izingubo zombede ngamanzi ashisayo.